लेजर पद्धतिबाट यसरी गरिन्छ पायल्सको उपचार, हस्पिटल बस्नै नपर्ने, एक दिनमा च्वाट्टै हुने – Complete Nepali News Portal
जटिल अवस्थामा भने शल्याक्रिया गर्नुपर्ने समेत हुनसक्छ । योग, आर्युवेदलगायत परम्परागत उपचार विधीबाट पनि यसको निदान खोज्न सकिन्छ । यसैविषयमा सर्जन डा. विश्वदिप तिमिल्सिनासंग कुराकानी गरेका छौँ । हेर्नुहोस पायल्सको उपचार लेजर पद्धतीबाट कसरी गरिन्छ :
यी रोगहरू भगाउन पिउनुहोस् हरियो खुर्सानी भिजाएको पानी ! खुर्सानीका...